Hada waxaa laga heli karaa PUBG khariidada lamadegaanka cusub ee Miramar oo ay weheliyaan tiro badan oo astaamo cusub | Wararka IPhone
Gabow, furuq. Kumaa ii sheegi doona in xiisaha aan u leeyahay ciyaaraha moobiilka, oo ka baxsan tartanka baabuurta ee caadiga ah, uu mar kale kufiicnaan doono da 'ahaan. PUBG iyo Fornite ayaa noqday labada kulan ee ugu muhiimsan taas oo timid nuskii sano ee aan joognay sanadka 2018, lagana yaabo inay noqon doonto 2018.
PUBG, taas oo ka duwan Fornite waxaa loogu talagalay dhagaystayaasha qaangaarka ah, ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub, oo ah cusbooneysiin kaas oo soo-saaraha uu ku darayo khariidad cusub, Miramar, khariidad lamadegaan ah oo horeyba looga heli jiray labada desktop iyo Xbox noocyadooda. Laakiin maahan wax cusub oo PUBG nooca 0.5.0 ay na siiso.
1 Maxaa ku cusub nooca Mobile PUBG Mobile.0.5.0
2 Hagaajinta ay PUBG Mobile ku heshay cusboonaysiinta 0.5.0
Maxaa ku cusub nooca Mobile PUBG Mobile.0.5.0
Khariidadda lamadegaanka Miramar, halkaas oo aan ka heli karno oo keliya hub cusub, laakiin marka lagu daro, waxaan sidoo kale heli karnaa gawaarida cusub ee la jaanqaadaya baahida dhulka.
Hadafka horumarka cusub ee aan ku qasbanahay urursado abaalmarino horumarka marka aan gaarno heerar cusub si aan u awoodno inaan wajahno howlgallo cusub.
Cusub hawlgallada toddobaadlaha ah taas oo aan ku heli karno abaalmarin sida ku xusan waxqabadkayaga ciyaarta.
Isdhexgalka iyo nidaamyada isku xirnaanta ayaa lagu daray, taas oo noo ogolaaneysa inaan saaxiibadeena la falgalno In la abuuro isku xirnaan marka isku xirnaantayadu ay aad u sarreyso.
Gobollo cusub ayaa sidoo kale lagu daray, si aan u dhisno taas oo ah gobolkeena iyo calankeena.
Cusub kanaalada luuqado kala duwan. Codsigu wuxuu na tusi doonaa kanaallada lagu hadlo luqadda aan ku diyaarinnay barta.
Avatar cusub inaad karti u yeelato dabeecadeena ugu badnaan.
Dukaanka ayaa noo oggolaanaya inaan horay u sii eegno oo aan wax iibsanno dhar cusub iyo waxyaabo si loo habeeyo dabeecadeena.
Stash ayaa lagu daray, halkaas oo aan ku iibsan karno waxyaabo gaar ah qiimo dhimis.
Hagaajinta ay PUBG Mobile ku heshay cusboonaysiinta 0.5.0
La hagaajiyay dareeraha hab daawade.
Dhawaaqyo iyo saameyn cusub dagaalka melee (hub la'aan) iyo albaabada jaban.
La hagaajiyay dheecaanka qolka baarashuudka
The xawaare baarashuud ah hadda la mid ah nooca PC-ga.
Shaashadda macluumaadka shakhsiga ah iyo natiijooyinka ayaa hadda ah dareen badan.
Waxay kaloo leedahay hagaajinta xakamaynta fuulitaanka markaad ordeysid iyo habka martiqaadka markaad sameysid kooxo.
Waan ka faa'iideysan karnaa akoonkeena Twitter si aan u ilaalino horumarkayaga ku saabsan arjiga oo lala waafajiyo aalado kale.
Faahfaahinta hagaajinta ee codsigu helay, nama soo ogeysiinayo haddii dhibaatooyinka ay soo bandhigto ciyaartu, mararka qaarkood, ay la socoto Sameecadaha dhagaha ee Bluetooth waa la hagaajiyay, markaa waxay umuuqataa inaan tijaabinayno si aan u ogaano.
MOBILKA PUBG: DIIDAANKAfree
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Hadda waxaa laga heli karaa PUBG khariidadda lamadegaanka cusub ee Miramar oo ay weheliyaan tiro badan oo astaamo cusub ah